fanorenana tanàna vaovao tanterahiny eto amintsika. Nisafidy ny nangina aho hatramin’izay, hoy izy noho ny fisian’ireo mpamingana ny tetikasa nefa tsy ho ahy no nanaovako ireny fa ho an’ny vahoaka Malagasy. Nambarany ary fa mbola lesoka tamin’ity tetikasa ity ny tsy firaharahian’ny fitondram-panjakana nifandimby hatramin’izay ny maha zava-dehibe ny exode urbain. Anisany ny fananganana sekoly, ny hopitaly izay tokony hanomezan’ny fanjakana tanana ny fikambanana Hafari saingy nojereny fotsiny, hany ka sahirana ny mponina. Hiainga amin’ny heriny hanatanteraka ny tetikasa ny HAFARI manomboka izao ka fizarana kara-tany ho an’ny 80 %-n’ireo mponina ao Soaniedanana Ankazobe no hisantarany ny asa amin’ny sabotsy ho avy izao izay nomarihin-dRafanomezantsoa Jean Nirina fa havadika ho titra tsy ho ela. Hisy ihany koa ny ady fototry ny toerana hametrahana ny jiro hanazavana ny tanàna arahin’ny fitondrana mpiandry hanalana ireo karazana fanahy ratsy misakana ny tanànan’i Soaniedanana tsy handroso.